Catalonia: မြွေ၏ထွေးပွေ့အဖြစ်အများအပြားထင်မြင်ချက် ...
2 ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 Belz ကာတာလနိုင်ငံရေးကို 14
အကယ်. သင်တို့သည်ဤမျှဟုပြော မိုက်မဲခြင်း, တစျခုထက်ပိုအရေးပါမည်မဟုတ်
အဆိုပါနောက်ကွယ်မှသူတို့၏အကြောင်းကို Blather လွတ်လပ်ရေးဖြစ်စဉ်ကို Catalunyaတောင်မှကြောင်း ဂျော့ခ်ျဆိုးရော့ ဘီလျံနာနထေိုငျသူမြားဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှုကို dislate အားပေးတော်မူပြီ, ရုရှားဟောင်း KGB သူတို့ကိုထပ်တလဲလဲမေးခွန်းများကိုလုပ်သည့်အခါမီဒီယာမှတဆင့်ဆိုင်းဘုတ်များရယ်မော desternillan သောလည်းအလားတူအမျိုးမျိုးနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပေမယ့်အလွန်ဆင်တူထံမှ Tyrian နှင့် Trojan ဟာမြင်းတပ်မေ့ဘဲ, ရိုးရှင်းသောပျင်းနှင့်မျှမတို့အာဃာတတို့ကဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းများအကြားရင်းနှီးခင်မင်စွာ dynamiting နှင့်အနတ္တ, ဒါပေမယ့်အမှန်တရားမြင်ယာဉ်ကဒီ fiasco ရည်ရွယ်ချက်အတွက်တကယ့်ကားမောင်းသူမပါဘဲမောင်းနှင်ထားတဲ့အပေါ်ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းသံသယသည်အများအပြားကောက်ဖို့လာ:
က) မြေတပြင်လုံးကိုလေ propangandísticoအစီအစဉ်ကို သခင်ဘုရား Puigdemont မိမိနှင့်နှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်သူ့မိသားစုကိုထိန်းသိမ်း, ကောင်းစွာညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်အစားထိုးအတွက်လက်ခံရရှိစွပ်စွဲ Nip €အဆိုပါ 53.000 သန်းခွဲကိုက်ညီတဲ့နိုင်သည့်ငွေအများကြီး, လိုအပ်အပြစ်လွတ်စေအများပြည်သူရန်ပုံငွေအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်သည်, နှင့်ထပ်ခါထပ်ခါ, လုံလောက်မှုမရှိခြင်းနှင့်လက်မခံနိုင်ငြင်းဆန်ယူဆနှင့်ခုခံကာကွယ်ဖို့သည်ဟုသူပုန်အငြင်းအခုံလှုံ့ဆော်ဘယ်တော့မှ Espana သာဇာတ်စင်သင်တို့အပေါ်မှာ step အခါတိုင်းနစ်နှင့်၎င်းတို့၏ဆန္ဒပြပွဲများသို့လှည့်မရှိသောနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအခြေခံအုတ်မြစ်များပေါ်တွင်သီးမှအစေခံရာရှက်နှင့် caretudos trashy သူတို့ "ပညာတတ်" အခါရှေ့အစွန်းတာဝန်မဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်ချွဲဥစ္စာကိုဖြုန်း တစ်စပိန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အအဆုံးမဲ့ etceteras လိုသောမဟုတ်တခုတခုအပေါ်မှာအလျှော့ရပ်တည်ချက်ထိန်းသိမ်းခြင်း, အမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့အလုပ်မဖြစ်, ချထားသော, စိတ်ကူး, ပုန်ကန်မှုပေးဆောင်ကြတဲ့သူတွေကိုအဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့်အသိဥာဏ် coaligado, ဉီးနှောကျလြျှောဖှတျခွငျး၏သူတို့ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ wimps နှင့်နောက်လိုက်အရာရှိဖွဲ့စည်းထားသည် သူလုနီးပါးခံစားရန်ဒါဆိုးဆိုးရွားရွားအခြေအနေကောလျှင်အဖြစ် ဂျီဒီပီ၏ 20% တိုင်းပြည်, ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းမရှိဘဲ, ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမပါဘဲသို့မဟုတ်အမှန်ပင် recalcitrar ဘို့အများကြီးနတ်ဆိုးဘတ်ဂျက်အရွက်များနှင့်သည်းခံခြင်းနှင့်အသိပညာ abductee ပြည်တွင်းရေးနိုင်ငံသားအဖြစ်လာဘ်ထိုးရှိရာ charlatans နှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်စားလှယ်များလိုအပ်တစ်ဦးတည်းကြကုန်အံ့။ စိတ်ဆိုးခြင်းနှင့်အရေးကြီးသောဘာမျှပြည်နယ်တစ်ခုကောင်စီအားဖြင့်ဆန်းစစ်ခံရဖို့ပုံရသည်မေးခွန်းထုတ်, လမ်းဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်နည်းနည်း, ပိုစိုးရိမ်မိပင်နှစ်ပေါင်းမှတဆင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကနေထွက်ရှိတဲ့, ဤမျှလောက်မြေနှင့်ဒဏ်ခံမိုက်မဲဆုပျရှံရှာမှစတင်ခဲ့သည် အဆိုပါ fiasco fix မှလျှပ်စစ်ဥပဒေကြမ်း။
B က) က Catalunya စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အားကောင်းကြီးပြင်းဏ, သင်ပိုမိုစီးပွားရေးပိုင်၏အပိုင်းအစလိုက်တာနဲ့, သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များဥစ်ဖို့အစိုးရကြံစည်မှုရှိတယ် .. နေ့ရက်တိုင်းဖြစ်လာကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား, ဒီမြေတပြင်လုံးမူဘောင်ဖြစ်နိုင် ဗလင်စီယာထက်ကျော်လွန်သောသည်ပြုံးနေပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီဖြတ်သန်းကာတာလငွေသားမှတ်ပုံတင်နေ့က stagnates နှင့်အခွင့်အလမ်းများပိတ်သိမ်းအမြဲဖြစ်ရပြီသောသူတို့အဘို့ဖွင့်လှစ်ပါလျှင်တစ်ဦးဒီတော့အလှမ်းဝေးမဟုတ်သီအိုရီဖြစ်သက်သေပြလိမ့်မယ်အရာ, Extremadura နှင့် Andalucia gaunt ဖက်သဘောမျိုးနဲ့နည်းနည်းတံဆိပ်တရားမျှတတဲ့နှင့်အတူစည်းစိမ်ကိုဆင်းရဲဖြန့်ဖြူး၏ Commons ?.
ကျနော်တို့ကမတတ်နိုင်တာပေါ့, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူတို့ဖမ်းမိရသည့်အခါနိုင်ငံရေးသမားများ, အဆုံးစွန်သောအခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲသို့ရောက်ရန်ခွင့်ပြုထားပါသည်အနည်းငယ်သာပြစ်ဒဏ်ရှိသည်သောဤတိုင်းပြည်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပညာရှင်များတွေအများကြီး run သောအမြင်ဖြစ်ကြ၏ သူတို့ကိုပထမဦးဆုံးကော်မရှင်စုဆောင်းစဉ်အကျိုးစီးပွားများနှင့်အမြဲတမ်းအနိုင်ရ play ပါစေ Ibex 35အဘယ်မှာရှိသောအရာကိုသူတို့ "rote" နှင့်ဒဏ်ငွေဖြစ်မည်, အကောင့်ပေးထားခဲ့ကြပါလျှင်ကျွန်မမသိရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဆုံးစွန်သောအစဉ်အမြဲ, သူတို့ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်လိုသည့်ဝှက်ထားသောဘုရင်စနစ်ဖုံးကွယ်သောစစ်တုရင်ကစားပွဲလွှမ်းမိုးကြိုက်ခဲ့သည်လုပ်ဖို့နည်းနည်းတရားမျှတ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဖတ်သူများ, မိဖုရား Leticia ဒါဟာ "သမ်မတနိုငျငံ" ကိုကိုယ်စားပြု ရံဖန်ရံခါသူတို့ပစ်ချနေကြသည်သောဤပြဇာတ်ရုံ, တလျှောက်လုံးစာတမ်းများမရှိတော့မဆို aspiring တရားသူကြီး reddens ကြောင်းထင်ရှားတဲ့အမည်များနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကျပ်။
.. ဆေးတစ်လက်သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းချက်မျှလည်းမရှိအဘယ်ကြောင့်ထိုသို့ကျနော်တို့, သတင်းဝစှာကြှေးဖို့ "freeloaders" ဟောင်းသမ္မတ, လူဆိုးအဖြစ်ပေးဆောင်ဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ချေးများစွာကို "chorizos" နှင့်ကြွက်များနှင့်တစ်ဦး၏မြောက်မြားစွာဖောက်ကိုယ်စားလှယ်များကိုအသုံးပြုတဲ့နေကြသည်ရဲ့ လူတွေကသူတို့ပြီးသားတဲ့အခါမှာမြွေကြောင်းပုန်းခိုထဲကလောဘ၏အဆိပ်, အဘယ်သူမျှမကသူ၏ထွေးပွေ့လက်ခံရရှိရန်သွေးဆောင်ခံရနိုင်အောင်, ကိုယ်ပိုင်အမြီးနဲ့အရူးကိုက်နိုင်အောင် psyche ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ကိုငါသိ၏။
Fer Xesco သူ says:
3 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 13: 15
Andalucia နှင့်ချို ay estremadura Lei မပိုလိုအပျ
3 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 13: 16
ရိ Kien သင်အလုပ်လက်မဲ့ထင်ချေ ...
မာရီယာဟိုဆေး Garcia က Marquez သူ says:
3 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 17: 00
မာရီယာသညျယရှေု Garcia က သူ says:
4 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 09: 37
အဆိုပါ Extremadura နှင့် Andalusia တစ်ချိန်ကငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ပါတယ်ကြပါစို့။ သငျသညျကျွန်တော်တစ်ဦး ****** ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုသူတို့ကသူတို့ကိုတစ် ****** ပေးဆောင်နိုင်ငံခြားသားများမှစိုက်ပျိုးရေးလုပ်သားအဖြစ်သုံးပြီး, အရှိဆုံးကျော်လူမှုလုံခြုံရေးအထောက်အကူပြုပါဘူး။ သငျသညျမဆိုသလော သူကစပိန်မှကာတာလကျေးလက်တောင်ဘက်ထက်ပိုစျေးကြီးသွားတယ်။
Simons ဆာဗေးဒေါ Porras သူ says:
5 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 15: 53
5 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 17: 20
အများစုမှာရှိပါတယ်။ လူတွေလိုအပျကွောငျးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး မှလွဲ. ။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးကာတာလ
4 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 09: 40
ထိုသူတို့ကလယ်ယာထုတ်ကုန်တောင်ဘက်မယ်ဘယ်မှာသိ? တစ်ဦးကကာတာလနဲ့ဘောလုံးအစားအစာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ ala, ဂျီဒီပီမှထည့်သွင်းဖို့။
7 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 15: 42
7 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 18: 06
ဟုတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရှာလကာရည်မှာအဲဒီစားတို့သည်စင်မြင့်ထက်နှင့်ဒဏ်ဍာရီဆိုကြပါစို့။ ယခုပင်လျှင်ပင်ပန်း
Onieva မျှော်လင့်ချက် Ecija သူ says:
6 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 02: 59
ဟိုဆေး De Dios ဖာရ သူ says:
6 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 19: 50
ငါတို့အပေါင်းတွင်အစာကျွေးသည်, မိမိခိုင်ခံ့သောစိတ်, သူ၏အတ္တ Hitlerite အတူ indepes စွန့်ခွာဖို့ကိုဘယ်လို, သာ Catalonia အတွက် 30 နှစ်, သူတို့ဖြစ်ဟန်အလုပ်လုပ်နှင့်တကယ်ငါသိမြင်သွားပါပြီအကယ်စင်စစ် Currant လူများ, က ka အများစုမှာအောက်ပါအတိုင်း ကမ Catalan အဘိဓါန်ခဲ့သည်
7 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 15: 45
ငါ့မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းမက်ဒရစ်ကနေခွင့်မလွှတ်, ငါ့အဘိုးကသူ့ကိုဤပြည်မှကျေးဇူးတင်ဤနေရာတွင်တည်းခိုနှင့်ပျော်ရွှင်ငါမရှိတော့ပိုပြီးအဘို့ပြန်လာချင်ခဲ့တယ်တွေ့ရှိခဲ့ဒီမှာအလုပ်ရှာလာ၏။ သင်တို့ကိုငါတစ်ခုခုအကြောင်းကိုနာကြည်းနေ aqui.quiza ကြသည်မဟုတ်သူကိုမိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများကိုလစျြလြူရှုခြင်းမရှိဘဲ, Catalonia နှင့်ချစ်ခြင်းမွေးဖွားခဲ့သည်
6 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 21: 26
ဟိုဆေး De Dios ဖာရယခုနေ့တိုင်းအားလုံးကြွင်း callus ပေးသူကိုသူမြားကိုချမ်းသာကြွယ်ဝသောလူ boring နေသော Currant အဲဒီမှာအဲဒီမှာအားလုံး li လုယှက်ကြ wue အပေါင်းတို့နှင့် wue အထောက်အကူမပိုဖြစ်ကြ၏ဘယ်မှာဤတွင်ထိုသို့ပြုသလော Tabar ia သောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက် ကြံ, ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေ bla bla bla ပြောမယ့် fachas? အငြင်းပွားမှုများတဦးတည်းရှိသည်မဟုတ်ပေမယ့်အကောင်းခက်ခဲရန်ပွဲနှင့်ကျနော်တို့ကလွယ်ကူစေမည်မဟုတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြောင်း, ငါတို့ကဒီမှာ lis ဆက်လက်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီartículoTweetTodavía Share နေဆဲမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မိစ္ဆာဒိဌိအားအတွက်တရားမျှတမှာ .. "sopetón" မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုရပ်တန့်နိုင်သူမသိသောသူတစ်ဦး "ဝိုင်းလေး" ၏ "မြင်း" စီးနင်းသွားကြဖို့အများကြီးရှိပါတယ်။ ထိုနေ့၏ပဲ့တင်သံနှင့်အတူ [ ... ]
7 ဇန်နဝါရီလ 2018 22
ဒါကြောင့်စပ်စုသက်သေကိုအနည်းငယ်သာပါဝင်မှု, ညအချိန်တွင်လူကြိုက်များသောကာရစ်ဘီယံ "ကြွင်းသောအရာ" ၏အပူပိုင်းပရဒိသုအဖြစ်လူသိများအချို့သောလူစုများကိုဖြစ်ပျက်ပင်အန္တရာယ်လေ့လာသူ, ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပန်းဖြေ, လုပျဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီartículoTweetCuando Share [ ... ]